Toamasina: Roso ny fanamboarana lalana « by-pass »
Natao androany zoma ny fametrahana ny vato fehizoro ny fanamboarana ny « by-pass » mampitohy ny RN2 miainga eo amin'ny orinasa Somalaval Mangarano, sy ny RN5 eo amin'ny orinasa SMCC Ampilaolava.
Kasaina ho vita alohan'ny faran'ny taona ny asa fanamboarana. Ny orinasa Tsaravintana no nahazo ny fanamboarana.
Ny tamberimbidy tamin'Ambatovy mitentina 2,5 miliara Ariary no hanamboarana izany, miampy ireo fanampian'ny tsy miankina ara-pitaovana mitentina 100 millions Ariary eo ho eo, hoy Governora Faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore.
Fisolokiana: Teratany Nizeriana roa notanana am-ponja vonjimaika
Teratany Nizeriana telo lahy nanao fisolokiana tamin'ny alalan'ny tambazotran-tserasera no voasambotry ny Zandary avy ao amin'ny fikarohana heloka an'habakabaka (cybercriminalité), ny 10 sy 13 septambra 2020 teto Antananarivo.
Vehivavy teratany malagasy miisa roa no lasibatra, ka nahazoan'ireo vola mitentina 10 600 000 Ariary. Naman'izy ireo izay mipetraka any Dubai no atidoha nikotrika ny fisolokiana ka milaza fa handefa fanomezana nefa mitaky vola hikarakarana ny "certificat d'origine" an'ireo entana.
Ireo Nizeriana no mpandray izany vola izany.
Natolotra ny fampanoavana ny 16 septambra 2020 ny raharaha ka notanana am-ponja vonjimaika ny roalahy tamin'ireo mpisoloky telo.
Fokonolona ao anatin'ny Fokontany miisa telo ao amin'ny Kaominina ambanivohitra Lopary, Distrikan'i Vangaindrano no mivondrona ao anaty fikambanana Soa Miaradia. Natao mba hiarovana ny tombontsoa iombonana.
Miroso amin'ny fambolen-kazo izy ireo handrakotra ala an'ireo tanim-pokonolona. Fandraisana anjara amin'ny fandrakofana ala hikajiana ny tontolo iainana sady fanatanterahana ny voarakitra ao amin'ny drafitra fampandrosoana ny tanàna ny tsy maintsy hananan'ny Fokontany tsirairay avy tanim-pambolen-kazo.
Maro isika no te hanana fidiram-bola fanampiny ankoatran'ny asantsika andavan'andro. Misy ihany koa ireo manana trano tsy hipetrahany, na ilainy amin'ny fotoana voafetra ihany, na izy miasa any amin'ny faritra hafa, na mipetraka any ivelany.
Ny mpizahatany vahiny na ireo mipetraka eto an-toerana dia mila trano manokana, tsy any amin'ireny hotely ireny, fa trano efa misy entana sy izay ilaina rehetra, ka izy ihany no mahandro sakafo na manao ny fiainany toa ny andavan'andro nefa sady mitsangatsangana.
Matetika dia maharitra 7-15j izy ireny.
Arakarak'ilay trano, mety mihofa isaky ny efitra, fa matetika ilay trano iray manontolo no ampiasainy.
Io no antsoina hoe Maison d'hôte, izany hoe trano fandraisam-bahiny mahaleo tena ilay fianakaviana na olona hipetraka ao.
Sady mora izy io nefa tsara.